Link | Burma Muslim
By burmamuslim on November 1, 2013 | 1 Comment
စာအုပ်များကို အပင်ပန်းခံစွာ မြန်မာများအားလုံး မျှဝေခံစားနိုင်ရန်အတွက် ပေးပို့သူများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရွှေစကားမှလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားပါမည်။ စာအုပ်များရှိပါက မျှဝေခံစားနိုင်ရန် myanmarchatadmin@gmail.comို.သို့ပေးပို့ ကူညီကြပါရန်။
Posted in: အထူး, Link
မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း – အောင်ဝေး
ဗမာလက်ငင်းလွတ်လပ်ရေး – ဒေါက်တာဘမော်
ဗမာ့အရေးတော်ပုံ – ဦးလှ
လူထုနှင့် နိုင်ငံရေး – မောင်စွမ်းရည်
ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံ – ဘဟိန်း
လျှောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးခရီး – ရဲဘော်ဖေသောင်း
၁၉၈၈- ၂၀၀၂ အရေးအခင်းမှတ်တမ်း
ရန်ကုန်ကို ကိုင်လှုပ်သော ၇ရက်
နိုင်ငရေးအဖြာဖြာ – ဦးဘဘေ
၄ခရိုင်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆန္ဒပြပွဲကြီး – သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း
၁၉၃၀ တ၀ိုက် မြန်မာနိုင်ငံရေး သမိုင်း – သိန်းဖေမြင့်
ဖက်ဆစ်ကျွန်ဘ၀မှလွတ်လပ်ရေး – သခင်သန်းထွန်း
ရာသက်ပန်တော်လှန်ရေးသမား – နီအောင်မေသုအမှတ်တရ
ကျောင်းသား-ထောင်-တော်လှန်ရေး – ဖိုးသံချောင်း
၇၅နှစ်-၄၉နှစ်အမြင် ဗမာပြည် – စပ်စု
7-ဇူလှိုင် အမှတ်တရ – အလင်းအိမ်မဂ္ဂဇင်း-ဂျပန်
ငါနဲ့ မတူ ငါ့ ရန်သူ – ဒေါက်တာအောင်ခင်
(ဗမာ့အရေး) ညွန့် ပေါင်း
ဗမာ့နိုင်ငံရေး သုခမိန် – မောင်ထင်
လွတ်လပ်ရေး-အမျိုးသားရေး-နိုင်ငံရေးနှင့်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု – ဦးခင်မောင်ကြီး
မြန်မာပြည် အကျဉ်းချုပ် – ဦးရွှေဘဲ
တတိယ အင်္ဂလိပ်-ဗမာစစ်ပွဲ မင်းလှခံတပ် – အမ်တီကေ
တနင်္သာရီတိုင်း မြိတ်ရာဇ၀င်တော်ကြီး-ပ – ဆရာ ဦးကြီးစိန်
တ-ဘ-မ-လ ဗ ဖွဲ့ စည်းပုံ
ရဲဘော် သုံးကျိပ် (ကျော်ငြိမ်း)
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ – ဗမာ့ခေတ်ဦးဘရင်
ရတနာဂီရိမှ သီပေါမင်းအမှတ်တရ – အေးသိန်း
စုဖုရားလတ်ရှင်းတမ်း – ဟိန်းဇေ
ရတနာပုံမှ ရတနာဂီရိသို့– တော်ဘုရားလေးအောင်ဇေ
သီပေါမင်းပါတော်မူပုံ – ပညာဝန်ဦးဖိုးကျား
ဦးရာဇတ် – တင်နိုင်တိုး
ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာ – တက္ကသိုလ်စိန်တင်
တိုင်းပြည်ကနုနု မုန်တိုင်းကထန်ထန် – ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းတင်မောင်
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၁
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၂
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၃
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၄
အာဏာရှင်ကြီး၏ အတွင်းရေးများ – ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ကြည်ဆွေ
သမိုင်းနှင့် စကားပြောခြင်း – ဒေါက်တာသန်းထွန်း
ပစပ် ရာဇ၀င် – မှော်ပီ ဆရာသိန်း
မြန်မာသတင်းစာသမိုင်း အကျဉ်းချုပ် – မောင်သစ်လွင် .လူထု
ပညာရဲ့ သဘော – တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်
သေနင်္ဂဗျုဟာ အတတ်ပညာ – ချစ်နိုင်.စိတ်ပညာ
စာမဲ့ကဗျာ – ဗဂျီ အောင်စိုး
မူပိုင်ခွင့် – လူထုစိန်ဝင်း
လူငယ်နဲ့ တာဝန်ယူစိတ် – လူထုစိန်ဝင်း
ရှက်စိတ် – လူထုစိန်ဝင်း
မောင်စံဆိုသူမှာတမ်း – မောင်ဘတင်-မောင်ဘရှင်
ဗန္ဓုလ၀တ္ထုဆန်း -ပ – ဘီလူးကျွန်းမြမြ
အရိုင်းခေါ်သံ – ဂုဏ်ဝင်း
အနာဂတ်နိုင်ငံတော်သား – သခင်မြသန်း
စစ်နှင့် ဘုံဝါဒ – သခင်လှဖေ-ဦးဘခိုင်
ယောနသံစင်ရော် – ဦးဘသန်း
လူကြိုက်နည်းတဲ့ကောင် – မောင်ချောနွယ်
မြစိမ်းရောင်တောင်ကြော နဂါးငွေ့ တော – အောင်ငြိမ်း
လူနှင့် မူ – ဒေါက်တာတင်မောင်သန်း
လျှို့ ဝှက်လုပ်ငန်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်နည်း
၄၉ တော်လှန်ရေး မျိုးဆက်တဦး၏ ဘ၀ ဒိုင်ယာရီ – ရဲဘော်ထွန်း
ရခိုင်ရိုးမမှာ ဘ၀တကွေ့ - ကြာဦးဖြူ
လူငယ်တဦးရဲ့ မှတ်တမ်းမဲ့ မှတ်တမ်း – ၀င်းနိုင်ဦး
ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ – ဂျုးလိယက် ဖူးချစ်
ပီညဲရိုးအစီရင်ခံစာ – မမ
ဒိုမီနီယံအန္တရယ် – သခင်စိုး
လူရှင်သချိုင်္င်းများအကြောင်း – နေလင်း -အကသ
အိုင်ယာလန်သူပုန်-ဗုန်းအဖွဲ့ - မြဒေါင်းညို
ရန်သူနှင့်စကားပြောခြင်း – ဂါမဏိဘာသာပြန်
ဒီမိုကရေစီအမေးအဖြေ – ဘဲ့ ဖြူ
မက်ခ်ဝါဒ၏ရေသောက်မြစ် ၃ချက်နှင့် အပိုင်း ၃ပိုင်း (ဗကပ)
(ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့အလုပ်သမားနေ့ မိတ်ဆက်) ဗကပ
ဦးဝင်းတင်နှင် စစ်အာဏာရှင်ဆန့် ကျင်သူများ
ကရင်နီပြည်အကျဉ်းချုပ် – ဗျူဟာခင်
ကရင်ရာဇ၀င် – ရာဇ၀င်ဆရာကြီး ဦးပညာ
ရှမ်းပြည်နယ် ပြည်သူ့ အုပ်ချုပ်ရေးပန္နက်ချပွဲ
ရှမ်းပြည်နယ်အမှားတော်ပုံ – ခွန်ကြည်-သထုံမြို့ စား
ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကြမ်း (၂၀၀၈)
ပြည်ခိုင်ဖြိုး (သို့ ) နအဖ ဒေါက်တိုင်များ
ဗိုလ်တထောင်စေတီတော်သမိုင်း – ဦးကြီးဖေ
ဗုဒ္ဓ၀ါဒ – ဦးရွှေဘဲ
သာသနာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ – ဘုရားသားတော်
ဗုဒ္ဓအံတော်သမိုင်း – ရမည်းသင်းသီလ၀
မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာ – ဦးကိုလေး. (ခ) ဇေယျာမောင်
ဘ၀အကျဉ်းသား – ဦးရွှေအောင်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမွိုင်သို့်လျှို့ ဝှက်ခရီး – သုတေသီမြင့်ထွန်း
မှတ်မိသမျှ ကိုအောင်ဆန်းကျောင်းသားဘ၀ – သခင်ကျော်စိန်
ဗမာ့အောင်ဆန်း – မောင်ထင်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ – ဦးအောင်ခင်
ငါတို့ ဗိုလ်ချုပ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ – ဦးပုကလေး
ကြောက်ရွံ့ ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ရေး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ရွေးစင်မိန့် ခွန်း
ဗေဒါလမ်းကဗျာစု – ဇော်ဂျီ
ညီသစ်ဆင်းကဗျာစု – ဇော်ဂျီ
လူထုချစ်သမျှ – လူထုဦးလှ
ကျောင်းကန်အနီးမှမြန်မာပုံပြင်များ – လူထုဦးလှ
ဦးသုခ – လူထုဦးလှ
မန္တလေးသူ၊ မန္တလေးသားများ – လူထုဒေါ်အမာ
ဥပုသ်သည် – လူထုဒေါ်အမာ
ကြယ်စင်များရဲ မိခင် လူထု
ရွှေဝါပြည် – ရန်ကုန်ဘဆွေ
သံကြီးတမန်ကြီး – မန်းတင်
ကြာညိုနံ့ သင်းသော ရေ၀တီမ
မြသန်းတင့် အမှတ်တရပုံလွှာ – လင်းယုန်မောင်မောင်
သူတို့ အမြင်သူတို့ အတွေး
၁၉၃၀ တ၀ိုက် မြန်မာနိုင်ငံရေး သမိုင်း
အရှေ့ က နေ၀န်း ထွက်သည့်ပမာ ၁
အရှေ့ က နေ၀န်း ထွက်သည့်ပမာ ၂
ဟစ်တလာနှင့် ချိန်ဘာလိန် ဘယ်သူမှားသလဲ
ငရဲဆိုတာချိုနဲ့ လားဗျို့ 
ချစ်ကြွေးမပြေ – သန်းဆွေ
ချစ်သုံးလီ – သန်းဆွေ
လူသုံးပစ္စည်းရောင်းသူများ – ဖေမြင့်
အမေနှင့် အမေ့အကြောင်း – ချစ်စံဝင်း
၆ တိုက်မှာ လောက်ကိုက်တာ ခံဖူးသလား
ချစ်သောမေမေ – လှကျော်ဇော
Posted in: မှတ်စု, အထူး, Link
မီးလောင်ရာ လေပင့်ပေးသူများ (ဧရာဝတီ)
By burmamuslim on April 30, 2013 | Leaveacomment
အပြည့်အစုံဖတ်ရန် == > http://burma.irrawaddy.org/archives/38476
Posted in: သတင်း, Link
ဟာဂျီဦးအေးလွင်နဲ့ VOA နှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း
By burmamuslim on April 16, 2013 | Leaveacomment
မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ မူစလင်တွေအကြား ပဋိပက္ခတွေဟာ လက်ရှိမှာ ဘာသာရေးအသွင် ဆောင်နေပေမဲ့ တကယ်တမ်းမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ မူစလင် တွေဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ အစဉ်အလာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ အစ္စလာမ် သာသနာရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဟာဂျီ ဦးအေးလွင်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန်မြို့တော် အခြေစိုက် USIP ငြိမ်းချမ်းရေး သုတေသနအဖွဲ့ စည်းဝေးပွဲတစ်ခုမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဟာဂျီဦးအေးလွင်ကို ဗွီအိုအေဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။
Posted in: အင်တာဗျူး, Burmese Version, Link
ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုလေ့လာပါ၊ Open Your Eyes
By burmamuslim on April 7, 2013 | Leaveacomment
Thursday, April 04, 2013 Alders Ledge, Arakan Burma, Buddhist, Massacre, Mogh, Rohingya
(Soldier On Patrol In Rohingya Part of Sittwe, June 2012)
For the past six months the world has been basically shut out of the Rohingya ghettos and IDP (internally displaced peoples) camps. The government of Myanmar has made it hard if not impossible at times to reach the Rohingya minority as the Buddhists extremist attempt to complete their intended genocide. But there are brave individuals still attempting to get the word out of the “open air prison” that Burma has made for the Rohingya.
Assed Baig is one of those people. His voice is lending an outlet to the Rohingya who have been made voiceless by their own government. His articles giveawritten word toapeople who are being forgotten. And his broadcast out of Burma are being leaked through the iron grip of the Myanmar government.
These are few of his reports… this is the news from the front line.
(Rohingya IDP Camp Outside Sittwe, 2012)
Please note that it is hard to get information out of Burma. When the government notices that Assed is trying to get information about the Rohingya out they take actions to hinder or stop his progress. The work is hard, the government is hostile, and the local Rakhine are possibly violent to an individual they view as “Kalar” (unclean or dark skinned). Yet Assed is still over in Sittwe doing the work that the European and American media refuse to do.
The facts from the front still support the information we have received from people like Aung Aung in Sittwe. From the outside looking in it is still incredibly dangerous to be doing the things that Assed and Aung Aung are doing daily. But their work is vital. The world must bear witness. We can not look away and pray for the best of luck.
It is time for the West, and perhaps long overdue, to begin to scream for the oppressed. It is time that good, honest, decent people stand up and step into the gap between the Rohingya and death itself. We can not in good conscience set on the sidelines and wait till this is all blow past and the blood finally stops trickling out of the Arakan. If you can not donate your time ormoney, for the love of G-d, scream for the those who are dieing.
By sharing videos like these and articles like this one you can help raise awareness of the Rohingya Genocide. It does not take any measurable effort with all the social networking we do these days. And would your time really be better spent on Pintrest for the next five minutes than it would be by spendingafew minutes tweeting or sharing these images on Facebook?
Its time to wake up to the suffering of others, to feel their pain and make it your own. It is time to join the fight to stop this senseless slaughter of the Rohingya people. It is time to scream America.
Posted in: သတင်း, အထူး, Link, Photo
Burma,Yangon, 48th St. Madarasa Swadikia 13 students Shahidi funeral: ရှဟီဒီ(၁၃)ဦး၏ ဈာပနာအခန်းအနားမြင်တွေ့ရပုံ
By burmamuslim on April 2, 2013 | Leaveacomment
ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် (၄၈) လမ်း စာသင်ကျောင်း မီးလောင်မှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသော ကျောင်းသားငယ်လေး (၁၃) ဦးအတွက် မိသားစုများနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ အထူးကြေကွဲဝမ်းနည်းရပါတယ်။
(၁) ရဟီမွလ္လာဟ် (ရေကျော်)၊
(၂) ဟာရှင်မ် (ရေကျော် )၊
(၃) မုဟမ္မဒ်အုမရ် (ဒလ)၊
(၄) အဗူဗရှရ် (ဘိုကလေး)၊
(၅) အဗ္ဗဒုလ်လသိဖ် (ရွှေပြည်သာ)၊
(၆) မုဟမ္မဒ်စုဟိုင်း (သာကေတ)၊
(၇) မုဟမ္မဒ်ဟစန် (ကော့ကရိတ်)၊
(၈) အဗ္ဗဒုရ်စွဗ်ဗဟာန် (ကန်တော်လေး)၊
(၉) အီဗ်ဗရာဟီမ် (အင်ကုန်း)၊
(၁၀) အာရီဖ် (အင်ကုန်း)၊
(၁၁) ဖိုင်ဇလ် (သာကေတ)၊
(၁၂) အဗ္ဗဒုရ်ရဇက် (ဒဂုံတောင် ၅၆)၊
(၁၃) အဗ္ဗဇရ် (ဒဂုံတောင် ၅၆) တို့– ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ …..
မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြသော ကျောင်းသားငယ်လေးများအားလည်း သက်ဆိုင်ရာမှ ဆေးဝါးကုသ ကူညီပေးရန် တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေ စေလွှတ်ရန် အမြန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ဖိအားပေးတောင်းဆိုပေးရန် (၀ါ) မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံများအနက်မှ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏စစ်တပ်အားစေလွှတ်၍ မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကို ကာကွယ်ပေးရန် အိုအိုင်စီအဖွဲ့ချုပ်ထံသို့ စာပို့ရန် ဖြစ်ပါတယ်။
Name ဆိုတဲ့နေရာတွင် လူကြီးမင်းရဲ့ နာမည် အပြည့်အစုံကို အင်္ဂလိပ်လို စာလုံးပေါင်း၍ ရေးထည့်ပါ။
Subject နေရာတွင် Please stop genocide in Burma လို့ ရိုက်ထည့်ပါ။
As_Salamu Alaykum Warahmatullah Wabarakatuh
Praise be to Allah Al_Mighty. May the peace and blessings of Allah be upon our beloved Prophet Muhammed, his noble family and his honourable companions.
We, one of the minority groups in Burma are seriously violated by Buddhist terrorists. In the last night, 13 children of Myanmar Muslim have been burnt down by Buddhist terrorists. A lot of our children, women and men have been killed by Buddhist Terrorists in the genocide of Burma. This genocide has been systematically planed and sponsored by pre-military junta, Thein Sein’s government. Since the government of Burma is the main sponsor of this genocide, how could we expect the protection of our lives from Burmese government? We have no hope for protection from our government. We have no lives’ protection and more than 10 million lives of Burmese Muslims are in danger because of the serious crime of genocide.
We humbly and strongly request you to recommend for sending United Nation peacekeeping forces into Burma or to send the army of one of Muslim nations to protect our lives. Please take urgently action to recommend for sending UN Peacekeeping forces or an army to our country, Burma for the sake of Allah Al-Mighty.
May Allah reward you for your kind supports to Burmese Muslim communities in Burma.
ပြီးလျှင် Send ဆိုတဲ့ Button အပေါ်မှာ ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ လူကြီးမင်းရဲ့ အိမ်သူအိမ်သားများ၊ မိတ်ဆွေများရဲ့ နာမည်အရင်းကို အသုံးပြုပြီး လူကြီးမင်းမှ ၎င်းတို့ရဲ့ ကိုယ်စား ထပ်မံ၍ ပေးပို့ပေးလျှင်လည်း ရပါတယ်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကောင်းမြတ်လှတဲ့ အကောင်းအမွန်ကို နှစ်ဘ၀၊ နှစ်ဌာနစလုံးမှာ ချီးမြှင့်ပေးသနားတော်မူပါစေ။ အာမီးန်။
Posted in: အင်တာဗျူး, Link, Photo
ှဧပြီ ၂ရက် – ၁၀:၁၅ နာရီ
မီးလောင်ကွယ်လွန်သွားသော ကလေးများကို ယခု ရေဝေးသို့ ဆေးရုံကြီးမှ ခေါ်ဆောင်သွားနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ရေဝေး အစ္စလာမ် သချိုင်း တွင် ဒွဖွနာလ် (သဂြ်ုလ်) မည်ဟုကြားသိရသည်။
ကွယ်လွန်သွားသော ကလေးငယ် ရုပ်အလောင်းများကို ဆေးရုံကြီးမှ ရေဝေးသို့ သယ်ယူဆောင်ရွက်နေသူများမှ ကိုယ်တွေ့ မြင်တွေ့ရသူ တစ်ဦးပြောပြချက်အရ သေဆုံး ကွယ်လွန်သွားသော ကလေးငယ် ကျောင်းသားများ၏ ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ရေနံဆီအနံ့ ကဲ့သို့ အနံ့များ ရရှိနေကြောင်း သိရသည်။
Posted in: သတင်း, Link, Photo
မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး၏ရှင်းလင်းပြောကြားချက် တွင် ရှေ့နောက်မညီသော အကြောင်းအရာများ-
လောင်သွားတဲ့ မီးအားမြှင့်စက်က သူတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာ မီးတောင်မပျက်သေးဘဲ operational အဆင့်မှာရှိနေသေးတာတဲ့။ နံပါတ် ၁ နဲ့ ၄ ကိုဆက်စပ်စဉ်းစားပါ။ (screen shot ဖမ်းထားပါသည်။) (သူတို့ ဒီသတင်းကို ပြန်ဖြုတ်တာနဲ့ screen shot ကို တင်ပေးပါ့မယ်။)
ဧပြီလ၂ ရက်နံနက် ၂နာရီ ၄၅ မိနစ်ဝန်းကျင်ခန့်ကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးနံနက် ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင်ငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ မီးအားမြှင့်စက် ဝါယာရှော့ခ် ဖြစ်ကာ စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၏ ရှင်လင်းပြောကြားချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး၏ရှင်းလင်းပြောကြားချက် ——————————————————(၁) မိမိတို့ရောက်ရှိသည့်အချိန်တွင်မီးတောက်များ ထွက်ရှိခြင်း မရှိကြောင်း၊ပြတင်းပေါက်များက မီးခိုးများထွက်နေကြောင်း၊ လျှပ်စစ်မီးပင်လျှင် ပြတ်တောက်မှု မရှိသေးကြောင်း၊
(၂) ထိုအချိန်တွင် မည်သူမျှလည်းမရှိသေးကြောင်း၊ မိမိတို့မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များက ရေဖြင့် ထိုးပက်ခဲ့ကြောင်း၊တံခါးကိုဖွင့်လိုက်သည့်အ ချိန်တွင် ရှိနေသည့် ကလေးများ ဆင်းပြေးလာခဲ့ြေ ကာင်း၊
(၃) အားလုံးပေါင်း(ခန့်မှန်း)၅၀ ကျော် ၆၀ လောက်ရှိကြောင်း၊မိမိတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အောက်တွင်ငြိမ်းသတ်ပြီးအပေါ်သို့ တက်သွားခဲ့ကြောင်း၊အပေါ်တွင် အလောင်းများ တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း၊
(၄) မီးလောင်ကျွမ်းရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ အောက်ထပ်တွင်ရှိသော လှေကားခွင်တွင် ထရန်စဖော်မာ ရှိကြောင်း၊ထရန်စဖော်(မီးအားမြှင့်စက်) မှ စတင်လောင်ကျွမ်းသည်ဟု ယူဆကြောင်း၊ ၄င်းလောင်ကျွမ်းသည့်နေရာမှာ အတက်-အဆင်းပြုလုပ်သည့် လှေကားကို ပိတ်နေသည့်အတွက်ကြောင့် ဆင်းပြေး၍မရဘဲ ပိတ်မိနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအဆောက်အဦးမှာ ထွက်ပေါက်မရှိဘဲ ပြတင်းပေါက်များတွင်လည်းသံတိုင်များ အသေပိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မီးအားမြှင့်စက်မှစတင်လောင်ကျွမ်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊
— with Wunna Shwe and 17 others.
မြန်မာပြည်ရဲ့ အကြမ်းဖက်အထိကရုဏ်း လက်သည် ဘယ်သူလဲ ? ဖေါ်လိုက်ပြီ အပိုင်း (၅) နိဂုံး
Posted in: မှတ်စု, သမိုင်း, အထူး, ဆောင်းပါး, Link